Yaa baajiyay shirkii madaxda maamul-goboleedyada ee Garowe? | Warbaahinta Ayaamaha
Yaa baajiyay shirkii madaxda maamul-goboleedyada ee Garowe?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Wararka ka imaanay magaalada Garowe ee xarunta maamul-goboleedka Puntland ayaa sheegaya in uu baaqday shir wada-tashi ah oo madaxweyneyaasha maamul-goboleedyada ay u ballansanaayeen in magaaladaasi uu uga furmo maalinta berri ah oo taariikhdu ku beegan tahay 21-ka Sebteembar.
Warar ayaa sheegeya in wadahadal dhex maray madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye Qoor-qoor iyo Ra’iisalwasaare Rooble kaddib, uu Qoor-Qoor ka codsaday dhiggiisa Puntland in shirkaasi la hakiyo.
Shirkii shalay dhexmaray Qoor-Qoor iyo ra’iisalwasaare Rooble ayaa wararka qaar sheegayaan in arrintaan looga hadlay sidii lagu baajin lahaa.